Ogaden News Agency (ONA) – Qawmiyadaha Oromada & Amxaarada oo Gorrada Iskula Jira.
Qawmiyadaha Oromada & Amxaarada oo Gorrada Iskula Jira.
Posted by ONA Admin	/ July 19, 2018
Wararka naga soo gaadhaya gudaha Itoobiya ayaa sheegaya inuu jiro khilaaf ka dhex taagan qowmiyadaha kala duwan ee guud ahaan Itoobiya gaar ahaan kuwii waayahan danbe xulufada ahaa ee Oramada iyo Amxaarada.
Sida aan wararkan kuhelayno khilaafka ugu wayn ayaa waxa uu kataaganyahay caasimada Itoobiya ee Addis Ababa oo ay Oromadu rabto inay Amxaarada kafara maroojiso lahaanshaha magaalada.
Oramada ayaa donaysa inay magaca caasimada u badasho ( finfine) halka Amxaarada aan la maqashiin karin in wax isbedal ah lagu sameeyo magaca caasimada. Waxaa kaloo laysku hayaa lahaanshaha magalada iyo maamulkeeda, taasi oo ay doonayso Oromadu inay kamid noqoto kililka ama gobolka Oromiya.
Amxarada ayaa Oromada u aragtay inay xawaare ku socdaan halisna kuyihiin jiritaankooda siyaasadeed doonayaana inay casimada kasaaran. Oramada iyo Amxarada ayaa ah laba qowmiyadood oo colaad qoto dheer ka dhaxayso waxaana loo badinayaa inay kala boodi doonaan.
Iskudhaca Amxarada iyo Oramadu waxa uu fursad dahabi ah uyahay qomiyada Tigray oo takoor xun lagu hayo khadkana kasii baxaysa kadib mudo 27 sano ah oo ay ku amar ku taaglaynayeen talada dalka iyagoo xasuuq baahsan u gaystay guud ahaan shucuubta ku hoos dulman Gumaysiga Itoobiya gaar ahaan shacabka Soomaalida Ogadenya.
Durba waxaa bilowday is dhaleecaynta udhaxaysa dadka caanka ah ee labada qomiyadood. Waxana jira meelo badan oo lagu kala aragti duwan yahay.